विश्वकै महँगो तरकारी होप सुट्स, जसको मूल्य सुन्नुभयो भने पर्नुहुनेछ चकित ! – दैनिक नेपाल न्युज
विश्वकै महँगो तरकारी होप सुट्स, जसको मूल्य सुन्नुभयो भने पर्नुहुनेछ चकित !
काठमाडौँ । बजारमा सामाग्रीको माग अनुसार मूल्य पनि बढिरहेको हुन्छ । त्यस्तै विश्वमा यस्ता तरकारीहरु रहेका छन् । जसको मूल्य विश्वकै सबैभन्दा महँगो रहेको छ । सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला तर विश्वमा पाइने तरकारीहरु मध्ये होप सुट्सको मूल्य निकै महँगो रहेको छ ।
यसको मूल्य करिब १ हजार युरो अर्थात १ लाख ३० हजार प्रतिकेजी नेपाली मूल्य रहेको छ । निकै स्वादिलो हुने यो तरकारीलाई अचारको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा धेरै तरकारीको माग हुने बेलायतमा तरकारीको अखेती ब्रिटेन, जर्मन लगायतका धेरै ठाउँमा गर्ने गरिन्छ ।
यसलाई वसन्त ऋतुको समयमा जंगलमा लगाइन्छ । तर उत्पादन भने १२ महिना नै गर्न पनि सकिन्छ । चाडै बढ्ने तरकारीको रंग बैजनी हुन्छ । जब तरकारी बढ्दै गएर हरियो रंगमा परिवर्तन हुन्छ तब खानको लागि योग्य हुन्छ ।